न्युट्रोन स्टार (Neutron Star) भनेको के हो ?
फ्रेवुअरी 19, 2018 अप्रील 16, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments Neutron Star, न्युट्रोन स्टार
हाम्रो ब्रह्माण्डमा भएको प्रत्यक वस्तुको शुरु र अन्त्य वा जन्म र मृत्यु आवश्यक हुन्छ । सूर्य लगायत अन्तरिक्षका सम्पूर्ण ताराहरुको पनि जन्म र मृत्यु हुन्छ । ताराको जीवनकालको अन्त्य तीरको अवस्थालाई न्यूट्रोन स्टार भनिन्छ । ताराहरु नियमित रुपमा चम्कनुमा त्यसभित्र इन्धनको रुपमा रहेको हाइड्रोजन परमाणुहरु नामकिय प्रक्रियाबाट हिलियस परमाणुमा परिणत हुदा निस्कने बिशाल मात्राको ऊर्जाले काम गरेको हुन्छ । सूर्यभन्दा १.४ देखि ३ गुणा बढी पिण्ड भएको ताराहरुमा इन्धन वा हाईड्रोजन परमाणुहरुको मात्रा सकिदा हिलियम परमाणुहरुबाट बनेको पदार्थ ताराको केन्द्रतीर तानिन्छ । परिणाम स्वरुप तारा आफैभित्र भासिन जानाले अत्यन्तै बढी घनत्व भएको सानो आकारको न्यूट्रोन स्टार भन्ने गरिन्छ । जसको व्यास करिव २० किमीको हुन्छ ।
पृथ्वीको व्यास भूमध्यरेखिय क्षेत्रमा ६ हजार ३ सय ७८ किमी भएकोले गर्दा यो तारा पृथ्वीको तुसलनामा निकै सानो छ । तर यसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति भने पृथ्वीको भन्दा २ अर्व गुण बढी छ । यसको यति धेरै गुरुत्वाकर्षण शक्ति हुनुको कारण, यो असामान्य घनत्व भएको कारणले गर्दा नै हो । अलि नै बढी गुरुत्वाकर्षण भएकोले न्यूट्रोन स्टारमा रहेका परमाणुहस्मा प्रोटोन तथा इलेक्ट्रोनहरु एकै ठाउँमा खाँदिन पुग्छन् । इलेक्ट्रोनको विद्युतीय चार्ज ऋणात्मक र प्रटोनको चार्ज धनात्मक हुन्छ । ती एकै ठाँउमा खादिदा एकले अर्काको कणहरु चार्ज नहुने न्यूट्रोन कणहरुमा बदलिन्छन् । यसरी बनेका ताराहरुमा न्यूट्रोन कण मात्र हुन्छ तर इलेक्ट्रोन र प्रोटोन हुदैन । त्यसैले यो ताराको नाम न्यूट्रोन स्टार राखिएको हो । यी ताराको घनत्व न्यूट्रोन कणको घनत्वसँग बराबर हुन्छ ।
न्युट्रोन स्टार सन् १९६८ मा पत्ता लागेको थियो । तर कणको अस्तित्वको सैद्धान्तिक व्याख्या भने उक्त तारा पत्ता लाग्नु भन्दै ३५ वर्ष पहिले नै भईसकेको थियो । न्यूट्रोन स्टारको गुरुत्वआर्कशण असामान्य रुपमा धेरै हुने भएकाले यसमा हुने पहाडहरु केही मिलिमिटर मा अग्ला हुन्छन् । यस ताराहरुको घनत्व यति बढी हुन्छन् कि यसभित्रको डटपेनको बल आकारको सानो बस्तुको पिण्ड पनि ९१ ह्जार टन बराबरको हुन्छ । तारा आफैमा खादिदै जाँदा यसको घुम्ने गति बढ्न जान्छ । न्यूट्रोन स्टार यति तीब्र घुम्छ कि एक वा दुई मिलि सेकेन्डमा यसले एक फन्को मारिहाल्छ । यो भनेको प्रति सेकेन्ड करीव ३० हजार किलोमिटरको दरमा फन्को मार्नु हो । यसरी तेज गतिमा फन्का मार्ने न्यूट्रोन स्टारले विद्युत चुम्वकीय तरङ्ग छोडिरहेको हुन्छ । यस्ता तरङ्गहरुको अध्ययनबाट यिनीहरुको अस्तित्वको पृष्टि गरिसन्छ ।
← विज्ञान जगतमा माइकल फाराडेको योगदान के रहेको छ ?
जनमत सर्वेक्षण – राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी र उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन कै निरन्तरता पाउने अनौपचारिक टुंगो लागिसकेको भन्ने कुरामा तपाईको धारणा के छ ? →